पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ भ्रष्टाचारी ठहर, पदबाट बर्खास्त – Everest Dainik – News from Nepal
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ भ्रष्टाचारी ठहर, पदबाट बर्खास्त
इस्लामाबाद, साउन १३ । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदातले पनामा पेपर काण्डमा प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई दोष्ी ठहर गर्दै उनी प्रधानमन्त्री पदका लागि अयोग्य भएको ठहर गरेको छ ।
आज मध्यान्ह भएको सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश ऐजाज अफजल खानले पनामा पेपरसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै शरीफलाई दोषी ठहर गरेका हुन । अदालतले प्रधानमन्त्री संसद र अदालतप्रति इमान्दार नभएको भन्दै उनी पदमा बस्न नसक्ने समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
Pakistani paramilitary soldiers and policemen cordon off the main entrance of the Supreme Court building duringahearing on the Panama Papers case in Islamabad on July 28, 2017.
Pakistan’s Supreme Court was set to announceanew judgement on July 28 that could topple Prime Minister Nawaz Sharif, who is embroiled inalong-running corruption case that has gripped the country. Around 3,000 police and paramilitary forces were deployed around the court in Islamabad ahead of the ruling, due to be announced Friday morning,apolice spokesman said. / AFP PHOTO / AAMIR QURESHI
पाकिस्तानी समाचारपत्र डनका अनुसार, शुक्रबारदेखि नै अदालतको फैसलाको प्रतिक्षामा पाकिस्तानी जनता ब्यग्र भएका बसेका थिए । इस्लामावादमा रहेको सर्वोच्च अदालतको कोठा नंं १ मा आज बिहान ११ बजेर ४५ मिनेटमा सुनुवाई सुरु भएको थियो ।
सन् १९९० को दशकमा धनशोधनका माध्यमबाट लण्डनमा सम्पत्ति किनेको विषयमा पनामा पेपरमा शरीफको नाम जोडिएको थियो । शरीफ दुईपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला यी सम्पत्ति जोडिएको खुलासा गर्न वर्ष पनामा पेपर लिक भएपछि थाहा भएको थियो ।
यी सम्पत्तिका पछाडि विदेशमा स्थापित कम्पनीहरुको धन लागेको छ । तर यी कम्पनीको स्वामित्व शरीफका छोराछोरीसँग रहेको छ । यसमा लण्डनका चारवटा महंगा घर समेत रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पनामा पेपर्समा अवैध सम्पत्तिसम्बन्धि आरोपको जाँचका लागि गत मे महिनामा संयुक्त जाँच दलको गठन गरेको थियो । उक्त कमिटिले गत जुलाई १० का दिन आफ्नो प्रतिवेदन अदालतमा बुझाएको थियो ।
ऐतिहासिक फैसलाका लागि आसिफ सईद खोसाको अध्यक्षतामा ५ जना न्यायाधिशहरुको बेञ्च गठन गरिएको थियो ।
ट्याग्स: Navaj, Navaj Sarif
अमेरिकामा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, प्रहरीसहित ६ जनाको मृत्यु
कञ्चनपुरमा जंगली हात्तीको आक्रमणः २ को मृत्यु, ४ घाइते
वडाध्यक्ष नै बलात्कार आरोपमा पक्राउ !